Customer inkonzo ogxile ukwandisa ixabiso kwiimveliso!
Inkonzo yingcambu uphuhliso Sine kaThixo. kwezenzo zethu intengiso umi kunye nabathengi bethu kungakhathaliseki meko. Siya kugweba ukusebenza kwethu malunga nendlela kakuhle ukwanelisa iimfuno zabathengi bethu kwaye akhokelwe inkolelo yokuba abathengi bethu ekugqibeleni uya kuqinisekisa njani ophumeleleyo uya kuba nathi.
Emva inkonzo yokuthengisa:
Le Sales ziya kwazisa abathengi kwisithuba seeyure ezingama-24 emva kokubeleka;
Le Sales ziya kuqhubeka uphando ngokwanelisa kubathengi ngamathuba athile, ukuhlalutya kunye eshwankathela iimfuno zabathengi kunye nemarike kwiimfuno ezinokubakho;
Le Sales ziya kuqala ukwenza ingxelo kwiSebe leMfundo kunye ifomu ebhalwe kanye ukufumana izikhalazo zabathengi 'ngemveliso. Emva koko iSebe lweMigangatho liya kwenza uhlahlelo, ukuthatha amanyathelo okulungisa izinto, ukulandela nokungqinisisa neziphumo nokuphumeza yaye ekugqibeleni kwazisa iziphumo ukuya Sales. Le Sales ziya kuthumela la maxwebhu anxulumene nohlalutyo kubaxumi ukufumana isiqinisekiso lokwaneliseka;
Sinako yokuhamba ezahlukeneyo: Ngu Air, Ngu Sea, TNT / DHL / UPS / kaFedEx Express njl
yoyilo lobunjineli kunye nesisombululo zobugcisa:
Thina ube nekhono esomelela isisombululo yobugcisa ingakumbi Engineering and Design. Sizimisele ngokuyila kunye neenkonzo kunye ukuphucuka okuqhubekayo nokuphuhlisa. Abasebenzi bethu zobunjineli uneminyaka engaphezu kwe amava umazibuthe mveliso, uvavanyo, uqinisekiso lomgangatho.